चुनाव जिताउन ठूला नेतालाई आफ्नै ठाउँमा कठिन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल || 8 May, 2022
पाँच वर्षे अवधि भएको स्थानीय सरकारका लागि अबको पाँचौं दिनमा देशभरबाट ३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि चुन्न निर्वाचन हुँदै छ ।
यही पाँच दलीय गठबन्धनका र्शीष नेताहरूले एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउन भन्दै निर्वाचनमा तालमेल गरिएको बताउँदै मतदातासँग मत मागिरहेका छन् । तर, तिनै शीर्ष नेताहरूलाई भने आफ्नै जिल्लामा निर्वाचन जिताउन ठूलो खड्गो छ ।
पहिलो, गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल छैन । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन् । दोस्रो, जिल्लामा प्रभावशालीमध्येका निवर्तमान पार्टी सभापति कर्ण मल्ल नेपाली कांग्रेस (विपी) ब्युँताएर निर्वाचन अभियानमा छन् । उनले नेकपा एमालेसँग निर्वाचनमा तालमेल गरेका छन् । यी दुई कारणले देउवालाई गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन सहज छैन ।
यसको पुष्टि हुनेगरी प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाले शुक्रबार डडेल्धुरा पुगेर करुवा चिह्न लिएर निर्वाचन अभियानमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई मतदान नगरन आग्रह नै गरेकी थिइन् । पार्टीका मेयर नभए बजेट नपठाउने भन्न पनि भ्याइन् ।
गठबन्धनमै रहेको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि गृहजिल्ला चितवनमा निर्वाचन जिताउन मुस्किल परेको छ । कारण, कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिनु । हुन त उनी कांग्रेसको कारबाहीपछि पार्टीबाट अलग छन् ।
यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा यादव प्रमुख र न्यौपाने उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार थिए । यस पटक पनि सोही पदमा दुवै जना बागी भएर उम्मेदवार बनेका हुन्। बागीकै कारण यादवलाई गृह जिल्लामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन चुनौती थपिएको छ ।
‘चुनावप्रति उत्साह नै छैन’
सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखामा पनि गठबन्धन दलहरूबीच नै तालमेलमा समस्या भएपछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भनेर भट्टराई मत मागिरहेका छन् । उनले त गठबन्धन दलहरूबीच भएको तालमेलप्रति नै असन्तुष्टि पनि जनाउँदै आएका छन् ।
गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल हुन सकेन । चन्द्रपुर नगरपालिकामा कांग्रेसबाट सरोज काफ्ले, एकीकृत समाजवादीबाट बाबुराम दाहाल, माओवादी केन्द्रबाट हरि पौडेल र एमालेबाट शिव आचार्य प्रमुख पदका उम्मेदवार छन् ।
महानगरपालिका : गठबन्धन भर्सेस एमाले
यस्तो समस्या गठबन्धन दलहरूमा मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि गृहजिल्ला झापामा छ । उनकै गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमालेविरुद्ध राप्रपासहितको गठबन्धन छ । गठबन्धनका कारण ओलीलाई पनि पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन मुस्किल छ ।
यही हो बेला, जनताले विवेक प्रयोग गर्ने - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] स्थानीय चुनावको आफ्नै सौन्दर्य छ । किनकी, यसले स्थानीय आवश्यकतालाई जनताको तहबाट जनताकै घरदैलोबाट सुन्ने काम गर्छ । जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनालाई पूरा गर्न प्रयास पनि गर्छन् । चुनावदेखि चुनावसम्मको लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले मुर्झाएर राखेका कतिपय मुद्घाहरुले चुनावकै बेला पुनर्जीवन पाउँछन् । बिर्सिएका मतदातालाई सुन्न उम्मेदवारहरु बाध्य हुन्छन् । जनसामथ्र्य के हो ? भन्ने कुरा उम्मेदवारहरुले थाहा पाउने पनि यही बेला हो । […]
कांग्रेसमा घर झगडा : देउवाप्रति कोइराला–निधि असन्तुष्ट - Mero LifeStyle Mero LifeStyle